Tune Up Utilites collection - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Tune Up Utilites collection
TuneUp Utilities 2008 လေးပါ။
Last edited by tu tu; 28-07-2008 at 02:33 AM..
Tune Up Utilites ရဲ့နောက်ဆုံး Utilities 2008
Tune Up Utilites 2008 ENGLISH+ serial key
[SIGPIC][/SIGPIC]Nothing is to be late!
Last edited by nyilin; 07-02-2008 at 07:25 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ nyilin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by nyilin
23-02-2008, 12:43 AM
ပြန်စာ - Tune Up Utilites ရဲ့နောက်ဆုံး Utilities 2008
တစ်ခြား နေရာကနေ ပြန်တင်ပေးပါလားဗျာ
zshare ကဖြစ်ဖြစ် mihd.net က ဖြစ်ဖြစ်ရရင်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကောင်စုတ်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
23-02-2008, 02:17 AM
အောက်ကပို့စ်မှာတော့ Portable version ကိုပေးထားပါတယ်။
Portable များစုဝေးရာ... by ကိုသူ
ကျနော်ကတော့... မိသားစုဝင်တွေ တစ်ခုခုတောင်းဆိုစရာရှိရင် ဖိုရမ်စာမျက်နှာ အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ ရှာရန် ဆိုတာလေးကို ထိထိမိမိအသုံးချကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာကို ခပ်မြန်မြန်ရနိုင်တာပေါ့။
Last edited by tu tu; 28-07-2008 at 02:35 AM..
27-05-2008, 12:39 AM
ပို့စ် 80 ခုအတွက် 163 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Tuneup2008 ကို အောက်ကလင့်မှာ ယူလို့ရပါတယ်
keygen ရော patch ရော ၂ မျိုးစလုံးပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ someone အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-05-2008, 12:47 AM
ပြန်စာ - Tune up 2008
အခုလို ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
ဒါပေမယ့် ဆွေးနွေးချက်နေရာလေး မှားနေတယ်ဗျ ...
Applications ကဏ္ဍလေးမှာ တင်ရင် ပိုသင့်တော်မယ် ထင်တယ် ...
တာဝန်ရှိသူများ နေရာလေး ရွေ့ပေးလိုက်ကြပါဦး ခင်ဗျာ ..
နောက်တစ်ခု ....ကျွန်တော်တို့ keygen တို့ crack စတာလေးတွေကိုလဲ ....
ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာလိုလေး ရေးပေးစေလို့ပါတယ် ...
ကီးဂျန် ၊ ခရက်ကီး ..စသည်ဖြင့်ပေါ့ ...
ကျွန်တော် အကြံပေးတာပါ ခင်ဗျာ ...
လေးစားစွာဖြင့် ( ကမ်းသာယာ )
Last edited by ကမ်းသာယာ; 27-05-2008 at 12:51 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကမ်းသာယာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
17-07-2008, 12:34 AM
ကိုပိုင် မtutu ကိုsomeone ၀ိုင်းကူညီးပေးကြသူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.....အနော်တို့ရဲ့ myanmarfamily အရက်းစည်းလုံး
တယ်ဗျာ အရမ်းပျော်တယ် .......
Last edited by shadeboy; 17-07-2008 at 12:35 AM..
20-09-2008, 07:53 AM
တည်နေရာ: Baghdad 33°20′N 44°26′E
ပို့စ် 21 ခုအတွက် 65 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Tuneup utilities 2008 with key maker
Further information: http://www.tune-up.com/products/tuneup-utilities/
z share ကပါ
Download here: Tuneup utilities 2008 with key maker.rar - 12.73MB
Rar password: WWW.Myanmarfamily.Org
Last edited by Blackbrother; 20-09-2008 at 08:07 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Blackbrother အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by Blackbrother
TuneUp Utilites 2009 with ဆီးရီးယယ်
Tuneup ချစ်သူများအတွက် 2009 version ထွက်ပါပြီ
File size=36.9 MB
Credit goes to the original uploader...
[SIZE="3"][B][I] Beware! Cupid is armed and dangerous......[/I][/B][/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ Blackbrother အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသားကြီး, ဖယောင်း, လူမုန်း, တေဇာထွန်း, athinmoe85, AZM, blackNwhite, bothu, maJunior, tu tu
ပို့စ် 29 ခုအတွက် 92 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
TuneUp Utilities 2009 + serials လေးပါပါတယ်
TuneUp Utilities 2009 + serials ဆော့ဝဲလ်လေးပါအသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေကြမှာပါ
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ myatko296@gmail.com အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပဲပြုတ်, လူမုန်း, ဇော်ရဲပိုင်, ဝေဟင်, 4kyaw, bothu, breezes, nay nyo yi, nn1, sawjonnie, Thein Than, venus, VirusCode69
Visit myatko296@gmail.com's homepage!
Find More Posts by myatko296@gmail.com
ပြန်စာ - delete လုပ်မှာသေချာလား
ဟုတ်ကဲ့ delete လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် ၀င်ဖောပါရစေအုံး။
delete လုပ်ပြီးသားကို undelete လုပ်ချင်ရင်တော့ tuneup utilities 2009 ဆော့လ်ဝဲလေးကကူညီပေးပါလိမ့်မယ်
ဆော့လ်ဝဲတင်ပေးဖို့တော့ ကျွန်တော် upload တင်ထားတာမရှိလို့ လုပ်နည်းလေးပဲ ပြောပြပါရစေ။
tuneup ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ slove problem မှတဆင့် tuneup undelete ကိုသွားပါ။ next ကိုသွားပါ။ ထပ် next ပါ။
ိdelete လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဖိုင်တွေဟာ အမှိုက်ပုံးထဲမှာလည်း မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ ကိုပြန်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးပြီး restore ပေးရုံပါပဲ။ ကျွန်တော်မှာ လိုအပ်တာများရှိရင်လည်း ဖြည့်စွက်ပေးပါအုံး။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကျော်ခန့်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပဲပြုတ်, ဖယောင်း, တေဇာထွန်း
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 30 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Tuneup_Utilities_2009 with Serial key
ရှိပြီးသားဆိုရင် တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းများကို သုံးစေချင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဆီက ဒီနေ့ဘဲ ရခဲ့တာပါ။ အောက်က လင့်မှာ ရယူနိုင်ပါပြီ။
ဖိုင်နာမည် ---- Tuneup_Utilities_2009
ဖိုင်ဆိုဒ် ----- 15.9 MB
ဖိုင်လင့် ----- http://ifile.it/46zhdq1
Find More Posts by hanhtun
13-02-2009, 10:36 AM
ပို့စ် 158 ခုအတွက် 831 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Tune Up Utilites collection
Tune up ကို ဘယ်လိုသုံးရတာလဲ ။ အသုံးဝင်ပုံလေးကို ပြောပြပေးပါ ခင်ဗျား ။ နောက်ပြီးတော့ Tune up က Services Pack 1 မှာသုံးလို့ရသလား။ အင်စတောလုပ်တုန်းက မရဘူးပြောနေလို့။ အစဉ်လေးစားလျှက်
ကို ဖြိုးငြိမ်း ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်...အဲ့ဒီမှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ...ကို azm
Last edited by tu tu; 13-02-2009 at 04:00 PM.. Reason: remove quote
ဖယောင်း, လူမုန်း, AZM, tu tu
20-03-2009, 05:50 PM
အစ်ကို blackbrother ရေ
အစ်ကိုပေးထားတဲ့ tune up ကိုဒေါင်းပြီး အိမ်မှာ သွင်းတာ သွင်းလို့မရလို့
အဲဒါကျွန်တော့ကိုဘယ်လို install လုပ်ရတယ်ဆိုတာလေး ရှင်းပြပေးပါနော်
Find More Posts by မနက်ဖြန်
သူငုယ်ချင်း မနက်ဖန်ရေ ကျွန်တော် အခု tuneup 2009 ကို လုပ်ပြထားပါတယ်..သူငယ်ချင်းက ကို ဘလက်ဘရားသားပေးတာကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ 2008 ပါ...လုပ်ရမဲ့ ပုံစံက အတူတူပါပဲ....ပထမဆုံး မနက်ဖန်ချထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ် ကို double click လုပ်လိုက်ပေါ့..ပြီးရင်တော့
အောက်က အတိုင်း next ပေါ့...
အဲ့ဒီမှာ မနက်ဖန် စက်မှာနက်ရတယ်ဆိုရင် update ပေးလိုက်ပေါ့..သူ့ဘာသာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး update ပေးသွားပါလိမ့်မယ်....နက်မရှိဘူးဆိုရင်လည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး...အပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ် လေးကိုပိတ်လိုက်ပါ...ပြီးရင်တော့ serial key ထည့်ပေးလိုက်ပါ...ဒါဆိုရင်ရပါပြီ...
ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ tuneup 2008 serial key တွေပေးလိုက်ပါတယ်...သုံးကြည့်လိုက်ပါ...
Key : MAHQF-GBXAS-SWNHH-DGSPS-WLXQB-JLRWC
ကိုဦး, ဆန်းမောင်, ဖယောင်း, မနက်ဖြန်, လူမုန်း, သောကမဲ့မိုးတိမ်, AZM, lawliet, phyomyintthein, tu tu
ဒါဆိုနက်မရဘူး အပ်ဒိတ် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
အပ်ဒိတ် မလုပ်ရင်ကောဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ သုံးလို့မရတော့ဘူးလား
ပြီးတော့သူကိုသုံးဖို့အတွက် computer မှာ
memory တို့ harddisk တို့ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုကောရှိပါသလားဟင်
Last edited by lawliet; 21-03-2009 at 06:01 PM..
lawliet ရေ .....နက်မရရင် လဲ ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူး.update မလုပ်ရင်လဲ ဘာမှတော့ မဖြစ်လောက်ပါဘူး..(ကျွန်တော် သေချာမသိလို့ပါ.)..သုံးလို့တော့ရပါတယ်...(ဆော့ဝဲ run ပြီးလို့ ဒက်စတော့ပေါ်က shortcut ကို double click လုပ်ပြီးတော့ စီးရီးရယ်ကီး ထည့်ပေးရင် သုံးလို့ အဆင်ပြေပါပြီ)..နက်မရပဲနဲ့ အပ်ဒိတ်လုပ်တာတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး....ပြီးတော့ memory တို့ harddisk တို့ ကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး....အဲ့ဒါက ၀င်းဒိုးတွေမှာပဲ များသောအားဖြင့် ကန့်သတ်တာပါ....(ကျွန်တော် မသိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..)..control panel =>add or remove program မှာတော့ သွားကြည့်ရင် 46.55 mb လောက်ပဲ space ယူတာတွေ့ရပါတယ်...ကျွန်တော်သုံးဖူးသလောက်ကိုပဲ ပြောပြတာပါ...အဆင်မပြေရင် ထပ်မေးပါ...သိတဲ့သူတွေက ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်...အဆင်ပြေပါစေဗျာ............
ဆန်းမောင်, မနက်ဖြန်, lawliet
Tuneup Utilities 2009 v 8.0 + Serial
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ညီနေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဆန်းမောင်, လူမုန်း, ကျော်ထက်ချိန်, မောင်ဘိုတောက်, linthuraaung, Oliveway
14-06-2009, 02:57 AM
ကျွန်တော့်လက်ရှိကွန်ပျူတာက window7 ပါ။ tuneup 2009 ကို install လုပ်တာ setup မှာ အောက်က error လေးပြပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း tuneup ကိုသုံးချင်ပါတယ်.........
ဒါပေမဲ. အခုပေးထားတဲ.လင်.ခ်တွေကနေ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်........
ကျွန်တော် ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲလို.အဆင်အပြေဆုံးကတော. ifile.it ပါ......
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အဲဒီ မှာပြန်ပြီးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်........
ကိုဟန်ထွန်းတင်ပေးထားတဲ့ ifile.it link ရှိတယ်လေ ကိုလူမုန်းရဲ့
အပေါ်ကပိုစ့်တွေမှာလဲ တခြား ifile link တွေရှိသေးပါတယ်။ သေချာကြည့်ပါဦးနော်
Last edited by သောကြာသား; 14-06-2009 at 12:37 PM..
16-06-2009, 08:54 AM
cannot download this file တဲ.ဗျ......
အခုလို share ပေးတာအထူးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ............
ကိုလူမုန်းရေ ဒါကတော့ ကိုblackbrother ပေးထားတဲ့လင့်ခ့်ပါ။ ကျွန်တော်စမ်းပြီးပါပြီ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။
19-06-2009, 02:02 AM
25-07-2009, 09:56 AM
သုံးပုံသုံနည်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ အသစ်ထွက်တာတွေ့လို့ TuneUp Utilities ကြိုက်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 29-07-2009 at 07:33 AM.. Reason: password ထည့်
စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ပဲပြုတ်, ဖယောင်း, amaung344, blackNwhite
TuneUp Utilities 2010 Beta 4!
TuneUp Utilities 2010 Beta 4! လေးပါ။
Last edited by Aung Aung; 12-10-2009 at 06:13 AM.. Reason: add mediafire link
ညီလေးအောင်ထက်ကျော် အကိုတို့ အသိပေးချက်မေတ္တာရပ်ခံချက်တွေ မနေ့တနေ့ကမှ ရေးထားတယ် အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ ။ အကိုတို့ကိုမကူညီခြင်ဘူးလား။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ဆန်းမောင်, ကျော်ထက်ချိန်
HD Tune Pro. v_3.00 PyaitSone Applications013-06-2008 02:39 AM